Udinga ukubona le mibala emi-4 ekhazimulayo yeGolden Retriever - Izinhlobo
Badume ngokuzola nokuthembeka kwabo, iGolden Retriever ingelinye lalezo zinhlobo zakudala sonke esizithandayo.
Njengoba ucabanga ngokuthola iGolide eyakho, uqinisekile ukucabanga umdlwane wakho ophelele weGolden Retriever: uboya bawo obudakayo, amehlo abo ane-chocolate. Okungahle ungakucabangi, noma kunjalo, umbala wabo wengubo.
Kepha linda, angithi ama-Golden Retrievers… awagolide? Impendulo ayicaci njengoba ungacabanga!
IGolden Retriever 101
Ukubuyisa Okusagolide yeba inhliziyo yaseMelika eminyakeni eyikhulu eyedlule lapho befika okokuqala eMelika bevela e-UK. Namuhla, abakwaGoldens bayaqhubeka nokuqinisa indawo yabo njengenye yezinja zomndeni ezinhle kakhulu.
IGolden Retrievers ingama-canine aphakathi kuya kwamakhulu, imvamisa enesisindo esizungezile Amakhilogremu angama-55-75 (25-34 kg) nokuma Amasentimitha angama-20-24 (51-61 cm) ubude. Ngaphandle kosayizi wazo, lolu hlobo lunedumela lohlobo lwalo lobumnene bokuzijabulisa.
Kalula nje, amaGoldens anjalo zithandeka njengoba zinkulu!
Ubuwazi ukuthi kunezinhlobo ezingaphezu kweyodwa zeGolden Retriever? Ngokufana ne-chip yamazambane oyikhonzile, i-Goldens iza nezinhlobonhlobo eziningi.
Ukubuyiswa Kwegolide KweCanada zivame ukuba zinde kunezinye izinhlobo ezimbili. Amajazi abo ngokuvamile amafushane ngokungenamanzi amancane.
AmaBritish noma amaNgisi abuyisa iGolden baziwa ngamajazi abo amade, anombala okhilimu kakhilimu. Ngesifuba esiqinile nokhakhayi olukhulu, iBritish Goldens yizinqumo ezinhle zabanikazi abakhetha inja enesakhiwo esiqinile.
Ukubuyiswa Kwegolide KweMelika baba mncane kakhulu kunozakwabo. Bavame ukugqoka ijazi legolide elimnyama – umehluko omuhle emehlweni abo ansundu alula.
Njengoba kungenzeka uqaphele, ukwakheka kwabo noboya okusisiza ukuhlukanisa iGolide laseCanada kusuka eMelika noma eBrithani. Kepha kuthiwani uma singakutshela ukuthi lokhu kumane kuyisiqalo seqhwa eliyisaga?
Qhubeka ufunda ukuze ufunde kabanzi ngothingo lwenkosazana lwemibala ye-Golden Retriever!
Ngabe i-Golden Retrievers ingaba imibala ehlukile?
I-Goldens ivame ukuba ngumbala owodwa oqinile, enezisu ezilula, imilenze, nemisila. I-AKC ibona kuphela igolide elimnyama, igolide, nokukhanya okukhanyayo kule nqubo yokuzala ye-canine.
Akumangalisi-ke ukuthi iningi lamaGoldens lizowela ngaphakathi kwalolu hlu.
Kungazwakala sengathi i-Golden Retriever color spectrum incane kunomkhawulo, kepha lokho bekungeke kudlulele eqinisweni. Kukhona ifayela le- inani elingapheli lamathoni egolide nama-hues, futhi i-pooch yakho ingaba omunye wabo!
Empeleni, amanye amaGolden anombala ocebile kangangokuba amajazi awo abonakala enombala ogqamile noma onombala wejinja. Ezinye zinombala omncane, zibukeka njengezinyawo ezineqhwa ezinemilenze emine, ezinoboya.
Ushaqekile? Besicabanga ukuthi ungaba njalo. Uma ngabe kungokokuqala ngqa ukuzwa ngama-Golden Retrievers angekho kangako egolide, uzokwamukela okuhle! Qhubeka nokufunda ukuze ufunde kabanzi mayelana nombala ngamunye wejazi eliyinhloko wegolide.
Igolide elikhanyayo amajazi angabonakala emhlophe kokunye ukukhanyisa, kodwa empeleni angaphezulu kwendlovu.
Futhi kubizwa Ukhilimu wesiNgisi , igolide elikhanyayo umbala owaziwa kakhulu weGolden Retriever e-UK (yingakho i-moniker).
Ungalahli ithemba, noma kunjalo. Lokhu akusho ukuthi ukhilimu weGolden Retrievers kunzima ukuwuthola ngaphandle kweNgilandi. Lokhu kwahluka kuvamile emhlabeni wonke!
Inja encane yeGolden Retriever enethambo lokudlala
Igolide elijwayelekile (noma nje igolide ) ngokusobala idlange kakhulu emthunzini weGolden Retriever.
Okhanyayo no-honey-toned, lo mhlawumbe ngumbala owucabangayo uma ucabanga ngeGold Retriever yendabuko.
Hlangana noDelta Dawn, i-Dark Golden Retriever - Umthombo Wezithombe
Igolide elimnyama amajazi atholakala phakathi kwezinhlobo ezijwayelekile zegolide nokubomvu.
IGoldens enalo mbala wejazi empeleni ingaba nzima ngendlela eyisimanga ukwehlukanisa neGoldens ebomvu. Indlela elula yokutshela ukutshela funa ama-amber undertones .
Uma ungaboni lutho, lelo Golden Retriever linoboya obumnyama obumnyama.
Ngoba amachwane amnyama amnyama ahlangabezana nezinga lokuzala le-AKC, ayindlela eqinile yabanikazi abathanda ijazi elicacile kodwa futhi abafuna ukuncintisana embukisweni wezinja.
Hlangana neTiger, iRed Golden Retriever - Umthombo Wezithombe
Inethi IGolden Retrievers ayivelakancane, yize kungenzeki ukuyithola. Kufanele futhi sazi ukuthi 'okubomvu' yigama lesambulela. Eqinisweni, amaGoldens abomvu ayimithunzi ye i-mahogany, i-amber, igolide elibomvu, nomnyama onsundu.
Ngokuya ngobukhulu bejazi lakho elinomlilo weGolden, bangase benze iphutha nge Isethi yase-Ireland .
Izazi-mlando zithi ukuzalana phakathi kukaGoldens kanye nabakwa-Irish Setter yikhona okwethule isakhi sezinwele ezibomvu kuGolden bloodline.
Ngaphezu koboya babo obuhlukile, uboya obomvu bakwaGoldens ayiyinde noma ayizulazule njengamanye amaGoldens. Azinazo izimpaphe, noma.
Ngenkathi zisazodinga ukuzilungisa okubonakalayo, ungahle ucabange ngeGolden Retriever ebomvu uma ukhetha umdlwane onengubo yobude obumaphakathi.
Ingabe umbala owodwa we-Golden Retriever ungcono kunenye?
Cha! IGolden yakho umbala wejazi awunamthelela ebusheni bawo, ekuchithekeni kwawo, noma ekuhlakanipheni kwawo. Konke kwehlela ekuthandweni komuntu siqu. Lokho, nenhloso yenja yakho.
Uma uhlose ukukhombisa iGolide yakho ngokuncintisana, namathela komunye wemibala evunyelwe i-AKC: ukukhanya okukhanyayo kwegolide noma ukhilimu, igolide, noma igolide elimnyama.
Ngaphandle kwalokho, i-pooch yakho ingahle ivinjelwe ekubambeni iqhaza noma ishayiswe ngesijeziso.
Uma umdlwane wakho weGolden Retriever uqeqeshelwa impilo yokugona kosofa nesikhathi sokudlala, zizwe ukhululekile ukuya kunoma imuphi umbala owuthanda kakhulu.
Yimiphi imibala yeGolden Retriever ebiza kakhulu?
Ngamafuphi, awukho umbala obiza kakhulu kunomunye. Umdlwane wakho weGolden Retriever uzoba se-ballpark ye $ 500-3000, akunandaba ukuthi bakuphi kuhlobo lombala wegolide.
Lokho kusho ukuthi, abanye abalimi bacindezela abathengi abangazi ukuthi bakhokhele ngaphezulu ukhilimu wesiNgisi uGoldens.
Bona noma yiziphi izikhangiso noma amawebhusayithi aziqhayisa nge 'platinum' noma 'imhlophe engajwayelekile' imidlwane yeGolden Retriever? Ungayiweli!
Ayikho into efana neGolden Retriever emhlophe emsulwa. Noma yimuphi umdlwane wegolide obonakala umhlophe empeleni ukhilimu ophaphathekile impela.
Futhi, uboya bemidlwane yeGolden Retriever bungaba mnyama ngokuhamba kwesikhathi. Leyo pooch ye- “platinum” ingaba yiGolide ejwayelekile elindele ukuqhakaza.
Ngabe imidlwane yeGolden Retriever ishintsha umbala ngempela?
Uma ushaqekile lapho uthola ukuthi kukhona amaGolden Retrievers abomvu, ungahle uthande ukuba nesihlalo salokhu: IGolden Retrievers iyawushintsha umbala.
I-Goldens yizinhlamvu ze-canine. Ngonyaka wokuqala we-pup yakho, ijazi labo eliphezulu liyakhula futhi limboze kancane kancane ku-hue yegolide.
Uzothanda ukubheka emuva ezithombeni zomdlwane wakho omhlophe wasebusika ujulile uye kwigolide elimnyama!
Ngakho-ke uma imidlwane yeGolden Retriever ingaba yimithunzi yegolide engapheli futhi lowo mthunzi ungashintsha, ubikezela kanjani umbala weGolden Retriever?
Umbala wejazi lenja wehlela kuzakhi zofuzo zabo, ngakho-ke ungabheka abazali bakaFido bakusasa lakho ukuthola umbono wokuthi ingane yakho izophuma kanjani. Lokhu akuyona isayensi ngqo, noma kunjalo.
Eqinisweni, cishe akunakwenzeka ukunquma ukuthi imidlwane kamama uGolden izobukeka kanjani ngaphambili uze uzibone empeleni.
Noma iyiphi i-tint egazini legazi, noma ngabe ayizivezanga ezizukulwaneni ngezizukulwane, ingenza ukuvela lapho kuzalwa imidlwane.
Futhi ukwenza izinongo ngempela, ngisho nemidlwane yeGolden Retriever evela kudoti ofanayo ingabukeka yehluke ngokuphelele!
Ungase uthole ukubikezela okunembe ngokwengeziwe ngokuhlola izindlebe zakho zegolide. Ngaphandle kokunye okuhlukile, iGolden Retriever's umbala wokugcina woboya uvame ukufanisa umbala wabo wendlebe wobudlwane.
Uma sibheka iqembu lama-muffin we-snuggle ngezansi, singasho ukuthi umdlwane weGolden Retriever ngakwesokunene kungenzeka uhlale umbala kakhilimu ube mdala.
Eminye imidlwane, noma kunjalo, kubonakala sengathi inebhiya ejulile yegolide!
Ukunakekela ijazi lakho le-Golden's luscious
IGolden Retrievers yizinja ezinekhono kakhulu, kodwa into eyodwa abangakwazi ukuyenza ukugcina lawo malokhi amade ngaphandle kosizo lwakho.
Uma uboya bakho be-Golden buba bude, kuzoba lula ngokwengeziwe ukuthi amacansi neziphazamiso kuthuthuke. Shayela i-Golden Retriever yakho nsuku zonke ukuvimbela lokhu.
Ukuxubha nsuku zonke kungasiza ukuqhubeka nokuchitha, futhi. Noma ngabe i-Golden Retriever yakho ingukushiswa okujulile noma igolide elijwayelekile, baqinisekisiwe ukushiya umzila woboya lapho beya khona.
Zizwe ukhululekile ukuxubha iGolide lakho kaningi ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla, izinkathi zabo ezisinda kakhulu.
Noma yini oyenzayo, ungagundi iGolide lakho! Ngokuphikisana nenkolelo evamile, ukushefa iGolden Retriever kulimaza kakhulu kunokulunga.
Uma ukuchithwa kwenja yakho kungalawuleki noma inqubo yokuzilungisa inkulu, khanyisa umthwalo ngokuya ku-groomer onguchwepheshe.
Funda kabanzi: Amathiphu wokuthi ungakuphatha kanjani ukuchitheka kweGolden Retriever yakho
Imuphi umbala we-Golden Retriever ozowukhetha?
Kusukela ekuvuseni kuya ku-beige, izimpondo zendlovu kuya ekugqwala, Ama-Golden Retrievers eza nge-kaleidoscope yemibala.
Uma ukwazisa okwakudala, funa iGolide elinokukhanya kwendabuko kwengubo emnyama yegolide. Unobukhazikhazi be-avant garde? Igolide elibomvu elinamandla lingaba ujamu wakho!
Ngakho-ke, imuphi kule mibala odonsa iso lakho? Sazise kumazwana abekiwe!
Imibala yeLabrador Retriever
Ukuhlanganiswa kweChihuahua Husky: Ingabe bakhona? Ingabe uyayifuna?
Amagama ama-300 + we-Golden Retriever we-Retriever yakho ejabule futhi ethandekayo
jack russell terrier mix emnyama
iyiphi engeyona indlela eyiyo yokusebenzisa leli bhande?
ilebhu emnyama nomalusi waseJalimane
pitbull kanye chihuahua mix imidlwane
i-pit bull terrier impumulo ebomvu